Filohan’ny synoda FJKM, Pasitera Rakotonirina Charles : « Tsy marina ny fisian’ny fanodinkodinam-bola… » (NewsMada) | AEMW
Filohan’ny synoda FJKM, Pasitera Rakotonirina Charles : « Tsy marina ny fisian’ny fanodinkodinam-bola… » (NewsMada)
Nitondra fanazavana sy nanala ny ahiahy na koa resabe. Nambaran’ny filohan’ny synodan’ny FJKM tanterahina any Antsirabe, ny pasitera Rakotonirina Charles omaly, fa tsy mitombina ny vaovao niely amin’ny fanodinkodinam-bola amin’izao fivoriana izao.
« Tsy marina ny filazana fa nisy nanodinkodina ny vola 30 tapitrisa Ar natao ho an’ny synoda, avy amin’ny filoham-pirenena … Efa natolotra ny komity misahana izany ny vola ary nanaovana tatitra koa, ka nisy ny nampiasaina azy araka ny tokony ho izy ary mbola eo koa ny ambiny… Samy manana ny filazany sy ny andikany azy ny olona », hoy izy. Niteraka resabe tamin’ity herinandro ity ny momba azy io ary izao nitondran’ny mpitantana valin-kafatra izao. Nanteriny fa tsy manohana mpanao politika sy tsy tohanan’ny mpanao politika ny FJKM.
Ankoatra izany, anio vao ho raikitra ny fifidianana ireo handrafitra ny birao foiben’ny FJKM. Anisan’ny anarana miverimberina any an-toerana ny mpitandrina isany, Andriamasinoro Fidimalala, Zarazaka Jean-Louis, Irako Ammi ary ny mpitandrina Valisoa. Tsy mbola fantatra kosa hatreto ny ho filoha lefitra avy amin’ny laika satria hatramin’ny fotoana nanoratana, tsy mbola nandalo ny fivoriambe ny hetahetan’ny filoha teo aloha, Ravalomanana mbola hanohy roa taona hisahana izany toerana izany.
Mialoha izany, notanterahina omaly alina ny fifidianana ireo mpiandraikitra foibe miisa 100 ka notendrena ireo pasitera 19 sy laika 19 raha fidina kosa ireo 31 mpitandrina sy avy amin’ ny laika 31, hameno azy ho 100. Samy afaka mirotsaka ho kandidà ho birao foibe avokoa izy ireo, araka ny nambaran’ny filohan’ny synoda ihany.
← CUA : nofanina ireo mpanentana ara-tsosialy (NewsMada)
Fiaraha-miasa Nice-Madagascar : hametrahana «camera de surveillance» eto Antananarivo (NewsMada) →